Nin lagu Tuhunsan yahey Weerarkii Dalka Spain ka Dhacey oo Booliska dalkaasi Baadi goobayaan. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Nin lagu Tuhunsan yahey Weerarkii Dalka Spain ka Dhacey oo Booliska dalkaasi...
Nin lagu Tuhunsan yahey Weerarkii Dalka Spain ka Dhacey oo Booliska dalkaasi Baadi goobayaan.
Booliska dalka Spain ayaa ayaa baadi-goob xooggan ugu jira qofka looga shakisan yahay inuu qaaday weerrarkii Barcelona.
Dad ka badan 10 qof ayaa ku dhintay weerarka halka ku dhowaad 100 kalena ay ku dhaawacmeen, sida dowladda ay sheegtay.
Waxaa uu boolisku baadigoobayaa nin lagu magacaabo Yoonis Abuu Yacquub, kaas oo ay haatan rumaysan yihiin inuu yahay qofka habeenkii Khamiistii gaariga dadka faraha badan ku jiirsiiyay xaafadda Las Ramblas ee magaalada Barcelona.
Weerrarka Khamiistii ayaa lagu gaystay gaari nooca Fiat-ka ah oo la jiirsiiyay dad marayay hareeraha waddooyinka xaafadda Ramblas, iyadoo halkaana ay ku dhinteen 13 qof tobannaan kalana ay ku dhaawacmeen.
Booliska ayaa markii hore sheegay in nin lagu magacaabay Muusa Awkabir uu ka dambeeyay weerarkii gaariga lagu jiirsiiyay dadka.
Balse waxaa hadda la ogaaday in Muusa uu ka mid ahaa shantii nin ee ay boolisku ku dileen deegaanka loo dalxiis tago ee Cambrils.
Previous articleMuwaadin Soomaali ah Qabeyna Xanuun dhanka dhimirka ah oo ay Toogteen Ciidamada Dalka Mareykanka.
Next articleCasumaad uu ka heley Dalka Masar oo M/weyne Farmaajo la filayo in uu u Ambabaxo Dalkaasi.